RASMI: Real Madrid oo saxaafada u soo bandhigtay maclinkeeda cusub ee Carlo Ancelotti – Gool FM
Dajiye June 2, 2021
(Madrid) 02 Juun 2021. Real Madrid ayaa ku soo bandhigtay tababaraheeda cusub ee Carlo Ancelotti shir jaraa’id oo rasmi ah fiidnimadan caawa oo Arbaco ah, iyadoo ay goobjoog ahaayeen warbaahino kala duwan ee caalamka ah.
Real Madrid ayaa shalay ku dhawaaqday inay la soo wareegtay tababaraha ruug cadaaga ah ee reer Talyaani ee Carlo Ancelotti, kaasoo ka yimid naadigaEverton, si uu ula wareego howsha tababarka kooxda koowaad ee Los Blancos.
Carlo Ancelotti ayaa si Rasmi ah u badalay tababaraha reer France ee Zinedine Zidane kaasoo go’aansaday inuu isaga tago Real Madrid, kaddib markii ay kooxda ku dhameysatay koob la’aan xilli ciyaareedkii dhawaan lasoo xiray.
Haddaba Carlo Ancelotti ayaa shirka jaraa’id uu fiidnimadan caawa ka soo muuqday waxyaabihii uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa:
“Waan ku faraxsanahay inaan joogo kooxda ugu fiican adduunka, waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha, iyo qof walba, waxaan halkan ku sameyn doonaa waxa ugu fiican.”
“Waan ogahay waxa loola jeedo joogitaanka Real Madrid, waxaana ku sameyn doonaa si farxad iyo xamaasad leh.”